पुस्तक गणेश खनिया
मान्छे र रोबोटमध्ये कसको प्रेम सही छ? साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता काजुओ इशिगुरोले क्लारा एन्ड द सन मार्फत पाठकलाई द्विविधामा पुर्‍याएका छन्।
सगरमाथाको काखमा मियाहारा सपना
नेपालका ७७ वटै जिल्ला घुमेका ताकासी मियाहाराको स्वप्न परियोजना हो, खुम्जुङको तीन हजार ८८० मिटरको उचाइमा अवस्थित होटल भ्यू एभरेस्ट।
‘कार्ल मार्क्सको कसम’ पुस्तक सार्वजनिक
गोविन्द भट्टराईद्वारा लिखित पुस्तक ‘कार्ल मार्क्सको कसमः केही विकासका कुरा, केही निकासका कुरा’ सार्वजनिक गरिएको छ।
भक्तप्रसाद भ्यागुतोको २५ वर्षे यात्रा नेपालीमा लेखिएको बालसाहित्य पुस्तक ‘धुमधामको घुमघाम’ २५ वर्षमा २३ भाषामा अनुवाद भएको छ।
वसन्तले ल्याए नयाँ पुस्तक ‘बुद्ध विमर्श’ बुद्ध र बौद्ध धर्म-दर्शन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनमा सक्रिय लेखक वसन्त महर्जनको नयाँ पुस्तक ‘बुद्ध विमर्श’ प्रकाशित भएको छ।
सरल पात्र, असाधारण भोगाइ सुय्मो प्रेम, स्वतन्त्रता, जीवन, मृत्यु र आशाका कथाहरू लेख्छन्। उनका साहित्यमा प्रकृति र भूगोल निकै बलियो गरी प्रस्तुत गरिएको हुन्छ।
कर्णाली चिनाउने विज्ञ दृष्टि लोकसाहित्य स्थानीयको बाँच्ने आधार र सौन्दर्य हो। नेपालमा प्रचलित सबै संस्कृतिको पहिचान र संरक्षण भए मात्र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिन्छ।
महिलाका कथा समेटिएको पुस्तक ‘म’ सार्वजनिक महिलाका कथा समेटिएको पुस्तक ‘म’ शनिबार सार्वजनिक गरिएको छ।
सर्भेयर गौतमको ‘पन्ध्रौं चुली’ सार्वजनिक सर्भेयर खिमलाल गौतमको सगरमाथा सम्बन्धी पुस्तक ‘पन्ध्रौं चुली’ सार्वजनिक भएको छ।
दिमागले कसरी सोच्छ?
हामी सोचेर निर्णय लिएको भन्छौं। तर‚ त्यो सत्य होइन। केनम्यान भन्छन्- निर्णयमा हाम्रा प्राथमिकता र रुचि प्रतिबिम्बित हुन्छन्। साथै‚ विगतका सम्झना, विचार र मस्तिष्कको लहरबाट प्रभावित हुन्छ। जुन सत्य हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन।
श्याम साहको ‘जमीन’
मधेशभित्रका पनि ओझेल परेका भेगका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पाटा र कहरका विभिन्न रूप खुलाएर साहित्य जगत्का लागि मात्र होइन, समाजविज्ञानमा चासो राख्नेका लागि समेत श्यामले अनुसन्धानको नयाँ सन्दर्भ सामग्री थपेका छन्।